PA001 - I-alamu ye-OMG Personal Security Keychain Shrill - Izixazululo ze-OMG
I-PA001 - i-OMG Personal Security Keychain Shrill Alarm
I-Personal Security Keychain Alarm isebenza njengesisombululo sokuphepha esiphathekayo esinikeza ukuthula kwengqondo nomaphi lapho uya khona. I-alamu e-ultra-slim, engaqondakali ihlanganisa kalula kunoma iyiphi i-keychain noma ingangena kalula ephaketheni lakho, esikhwameni noma esikhwameni. Vele usebenze i-alamu ye-120-decibel ngokudonsa iphinikhodi esimweni esiphuthumayo noma esimweni esingaphephile ukuze udwebe ngokushesha futhi uqaphe abanye. I-pin design eyingqayizivele yenza kube nzima kumhlukumezi ukuvimbela i-alamu. Ukukhanya okubalulekile kwe-LED kunikeza ukukhanya okulula uma ufuna imoto noma umtholampilo womnyango. Qinisekisa ukuthi i-alamu yakho isebenze ngokugcwele nesibonisi sebhethri ephansi. Umklamo olula kanye nokusebenzisa kalula kwenza i-Personal Security Keychain Alarm ifaneleke kuyo yonke iminyaka.
Izenzo njengekhambi lokuphepha eliphathekayo eliletha ukuthula kwengqondo nomaphi lapho uya khona
I-alamu ye-Loud 120-decibel isebenza nge-push eyodwa ye-inkinobho
Umklamo wokuphina oyingqayizivele
Ikhanyisa ukukhanya okukhanyayo kwe-LED kokuthola imoto noma umnyango womtholampilo
5 x 4.2 x amasentimitha angu-1.2
Inombolo yomfanekiso wento
I-4 engavumelekile ibhetri yebhethri edingekayo. (kufakiwe)
Unyaka we-1 unqunyelwe
Ukubuka okuphelele kwe-3134 Ukubuka kwe-1 Namuhla